Ị nwere ike igosi m otu esi enwe ihe ịga nke ọma na Amazon n'iji data ọchụchọ nke ndị asọmpi m?
Ee, nke ahụ bụ ajụjụ kwesịrị ekwesị. Ekwuru m na ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe, ọchụchọ ọchụchọ Amazon nke ndị kachasị mma ma ọ bụ ndị òtù ha nwere ike ịghọ atụmatụ gị ziri ezi nke ọganihu azụmahịa kachasị mma n'ebe ahụ. Mụ onwe m kwenyere na isi ihe maka nsonaazụ ahịa gị kachasị elu nwere ike ịchọtakarị na nchịkọta amamihe kachasị elu nke ndị na-azụ ahịa na-eji, tinyere atụmatụ aghụghọ ọnụahịa. Ihe a bụ na ọrụ dum nwere ike ịghọ naanị otu mpempe akwụkwọ - ihe niile ị chọrọ bụ iji nweta ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị maka ịgba ọsọ nchụso kwesịrị ekwesị na n'ikpeazụ ghọọ ọganihu dị egwu na Amazon naanị iji nyocha ọchụchọ nke ndị asọmpi gị. Ya mere, na-eche na ihe kasị sie ike ebe a bụ ịchọta ihe ngwọta zuru oke n'etiti ọnụ ọgụgụ dị ukwuu dị iche iche dị iche iche dị na Ịntanetị - logiciel creation fiche de paye crete. Nke a bụ ihe dị n'okpuru ebe m ga-egosi gị ngwá ọrụ m kachasị mma iji mee ka ọ dịkwuo mfe - ma maka nchịkọta isiokwu mkpado, ụzọ kachasị mma maka ohere atụmanya maka kickstart, na ngwọta ọnụahịa na-akpaghị aka ga-ebute ụzọ na niche gị ma ọ̄ bụ ụdị ngwaahịa.
Gaa na Nzọụkwụ Kwesịrị Ekwesị Site na Mmalite
Ka m malite na ohere nchere na Amazon na nyocha ọchụchọ banyere ugbu a kachasị achọ ngwaahịa, ụdị ndị kachasị ewu ewu na mmemme kachasị mma na ahịa. Nke a bụ mgbe ngwá ọrụ JungleScout na-abata! A maara ngwanrọ a dịka nhọrọ kachasị mma maka nyocha ọchụchọ gbasara data maka ohere ịzụ ahịa dị mma na Amazon, ịchọta ihe kacha mma ịkwado nwere ike ịgụnye na ngwaahịa gị ugbu a. Kedu ihe ọzọ - ị nwere ike ịgbanwuo ọrụ ahụ na-enye obi ụtọ iji soro usoro ọnụọgụgụ nke ndị mmegide ị na-enwekwu ihe ịga nke ọma n'ime usoro dị mma ma dị mfe nke na-agba ọsọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onwe gị.
Debe ihe kacha mma kachasị mma na arụmọrụ kachasị mma
Akụrụngwa bụ ngwaọrụ ọzọ dị oke egwu maka ịchọta nnukwu foto nke ọchụchọ Amazon, data nchịkọta na isiokwu ndị kachasị elu ugbu a akwadoro maka ndepụta gị, nakwa ma eleghị anya nghọta kachasị dị mkpa banyere ebe isiokwu dị mkpa na ogologo-tail search ahịrịokwu ndị iro gị na-ama akara maka. Kedu ihe ọzọ - Achọpụtara m Igodo nke ọbụna karịa ike karịa na njikarịcha mgbasa ozi PPC maka ịrụ ọrụ kachasị mma. A sị ka e kwuwe, ngwá ọrụ a nyeere m nnukwu aka na njikwa ihe ize ndụ, site na atụmatụ ọnụahịa kwesịrị ekwesị na nke ziri ezi maka ọnụahịa m bara uru, ego ntanetị, ego ahịa, post-FBA net income, etc.
Irite Uru Ngwá Ọrụ Ntuzi na Ntughari Mgbasaozi
Nke ikpeazụ na-egosi ihe m chọrọ igosi gị maka taa bụ Keepa. Ọ bụ ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa Amazon. Ọ dị ọcha na nke doro anya na interface fọrọ nke nta ka onwe-nkọwa. Otú ọ dị, ka m depụta atụmatụ bụ isi nke Keepa pricing software - ọ dịkarịa ala maka iji zuru ezu. N'etiti ndị nke ọzọ, tracker ego a nwere ike inyere gị aka na mmekọ akụkọ ihe mere eme na-egosipụta n'ụzọ doro anya nke ọma, oge ngosi oge na ntinye ego / ịrị elu na nnweta mgbanwe, ohere dị mfe dị na aka site na ntinye ihe nchọgharị, yana ọrụ nyocha ngwa ngwa, ịhụ ngwaahịa ọhụrụ na Amazon ma jiri ọnụ ahịa tụnyere ụgwọ n'oge ọ bụla.